Machining namboarina namboarina ho an'ny fizarana famonoana faty - Casting Minghe
Fanariana maty rehetra
Masinina famonoana fanerena an-tseranana mangatsiaka
Machining namboarina namboarina fizarana
Machines namboarina namboarina ho an'ny fizarana famonoana ho faty, mpanamboatra casting anisan'izany ny mari-trano, bobongolo maharitra, zinc ary famonoana maty. Ny fahaiza-manao dia misy ny serivisy fanodinana faharoa, famaranana, polishing. Ny rafitra kalitao dia mifanaraka amin'ny ISO.
Minghe Orinasa mandefa maty manome ny mpanjifa amina karazana serivisy mekanika sy serivisim-panangonana. Manana traikefa be dia be amin'ny fanangonana fitaovana izahay, ao anatin'izany ny visy, ny visy, ny fehikibo, ny tsimatra, ny sisin-kesika, ny gasket ary ny peratra O ary ny fitiliana tombo-kase mba hahazoana antoka fa miasa ny vokatra.
Ny hakitroky ny serivisy fanariana maty dia mitovy, ny vokatra dia tsy mora vaky, simba ary milamina ny kalitao.